Dragon ဟာစီးတီး Hack Tool ကို
Dragon ဟာမြို့တော်ကို Facebook ပေါ်တွင်အများဆုံးကစားဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်. ဒီဂိမ်းထဲမှာသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နဂါးဖန်တီးရန်နှင့်အပင်ကိုကြီးထွားစေရန်ရှိသည်. ဒီဂိမ်း thi ၏တစ်ဦးအလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ပုံပြင်နှင့်ဂရပ်ဖစ်ကောင်းသောဖြစ်ပါတယ်နှင့်နှင့်ဂိမ်းဤမျှလောက်များစွာသောကစားသမားတွေရှိတယ်. ဆိုဒ်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတွင်ဒီဂိမ်းများစွာကမဲပေးခဲ့ကြပါတယ်ခဲ့သည်5ကြယ်တို့သည်. ဂိမ်းတော်တော်ခက်သည်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကတစ်ဦး hack ကဖန်တီး
hack ကနှင့်အလုပ် great.This သုံးစွဲဖို့အလွန် easty ကျွန်တော်တို့ရဲ့ team.Dreagon မြို့ hack က tool ကို si အနေဖြင့် relased နယူး Hack tool ကို tool ကို hack တိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကစုံစမ်း2ရက်သတ္တပတ်နှင့် .This ဖြစ်ပါတယ် updated ဖြစ်ပါတယ် 100 % မသိရှိနိုင်ခြင်းနှင့်ဒီ hack အတူသင်တို့ unlmited ကျောက်မျက် add cand , ရွှေနှင့်. ပျော်ပါစေ
cah alas ရှိပါတယ် ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 19, 2014 တွင် 6:37 နံနက်
999999999ရွှေအ 99999999food 99999999gems
မေ 7, 2014 တွင် 1:40 ညနေ
မေ 7, 2014 တွင် 1:43 ညနေ
Iyus က Yusuf ကပြောပါတယ်:
မေ 11, 2014 တွင် 2:35 နံနက်